Hay’ad Caalami Ah oo Kadigtay Macaluul Ogadenia Kajirta. | ogaden24
Hay’ad Caalami Ah oo Kadigtay Macaluul Ogadenia Kajirta.
Hay’ada caalamiga ah ee Famine Wachdog oo fadhigeedu yahay wadanka Maraykanka ayaa ayaa warbixin dheer oo ay soosaartay kusheegtay in heerka macaluusha wadanka Ogadenia ee gacanta gumaysiga Itoobiya kujira uu sare ukacay, waxayna hay’adu sheegtay in hadaan macaluushaas si dag dag ah wax looga qabanin ay sababi karto dhimasho badan.
Hay’ada Famine Wachdog oo kashaqaysa arimaha abaaraha iyo sidii looga hortagi lahaa ayaa sheegtay in heerka macaluusha Ogadenia oo ahaa 4 uu sare ukacay isla markaana uu gaadhay 5, taas oo sida ay hay’adu sheegtay kalifi karta in ay udhintaan dad aad ubadan oo ciyaal iyo haween ubadan.
Hay’ada ayaa sheegtay marka la eego heerka cabirka ee 5ta ah in uu yahay heer khatar ah marka lafiiriyo qaabka loo cabiro macaluusha, waxayna hay’adu soo jeedisay in xukuumada wayaanaha iyo caalamkuba ay u istaagaan sidii wax looga qaban lahaa abaaraha ku dhuftay wadanka Ogadenia.
Guud ahaan wadanka Itoobiya ayay hay’adu sheegtay in ay sare ukacday macaluushu, waxayna hay’adu xustay in maalinba maalinta kadambaysa ay kasii daraysa abaarta iyo macaluushu, waxayna hay’adu xaalada Itoobiya kusheegtay mid khatar ah.
Dhowr hay’adood oo caalami ah ayaa warbixino kasoo saaray xaalada Itoobiya waxayna sheegeen in ay wadanka Itoobiya kunool yihiin inkabadan 10 milyan oo ciyaal iyo haween ubadan, kuwaas oo sida ay hay’aduhu sheegeen aad uliita.
Xukuumada gumaysiga Itoobiya oo iyadu ah mida sababtay in macaluusha intaas la’eg ay wadanka kadhacdo ayaa wali mashquul ku ah sidii ay dadku ubaabi’i lahaayeen, waxayna kabixi la’yihiin hub iibsasho iyo hanti boob.